သနပ်ခါးမေ: March 2012
By **~ မြတ်ကြည်~** 12:19 AM မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
သနပ်ခါးမေ ဘလော့လေး ဖြစ်တည်တဲ့ ၉လ အတွင်းမှာ ပုံမှန် လာရောက် အားပေးကြလို့ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင်။ :) visitor count လေးနဲ့ comments လေးတွေက ကျွန်မရဲ့ အားဆေးတစ်ခွက်ပါပဲ။
များမကြာမီ အချိန်လေးအတွင်းမှာ သနပ်ခါးမေကို လာရောက်ဖတ်ရှုတဲ့ အခေါက်ရေ က ၁ သိန်း ပြည့်တော့မှာပါ။ ဒီလိုလေး ဖြစ်လာတော့ ကိုယ်စိုက်တဲ့ သစ်ပင်လေးက အသီးအပွင့်လေး ဆူးခွတ်ရသလို ပဲ အရမ်း ပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်။ တစ်သိန်း ပြည့် အမှတ်တရ အနေနဲ့ လက်ဆောင်လေး ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
အကယ်၍ စာဖတ်သူ လာရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကောင်တာ က ၁ သိန်း အတိပြည့်တာနဲ့ ကြုံရင် ၁သိန်းလို့ အီးမေးလိပ်စာနဲ့ တွဲပြီး စီဘောက်စ်မှာဖြစ်ဖြစ် ကော်မန့်မှာဖြစ်ဖြစ်ရေးသွားပေးပါနော်။ ဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ် အရောက်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
သနပ်ခါးမေ ဘလော့လေးကို ဒီထက်ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစား တင်ဆက်သွားပါမယ်လို့။
စာဖတ်သူ အားလုံး စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမှာခြင်းတို့နဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။
စာဖတ်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးဥပကာရ တင်လျှက်...
By **~ မြတ်ကြည်~** 11:43 PM လက်​သည်း ( nail art )
လွယ်လွယ် ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ လှတဲ့ လက်သည်းဆိုးနည်းလေး ပါ။
အရင်ဆုံး တိပ်ကို လက်သည်းပေါ် တစောင်းကပ်ပါမယ်။
လွတ်နေတဲ့နေရာလေး ကို အဖြူရောင် ဆိုးပါ။ တိပ် ကပ်ထားတော့ ဆိုးရတာ ပိုလွယ်သွားပါတယ်။ အတိအကျဆိုးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
လက်သည်းဆိုးဆေး ခြောက်သည် အထိထားပြီး ခြောက်ပြီဆိုရင် တိပ်ကို ခွါပါ။
ပြီးရင် လက်သည်းဆိုးဆေးတို့ထားတဲ့ သွားကြားထိုးတံလေးကို ယူပြီး အခုံးလေးတွေ လိုက်ဆွဲပါမယ်။
ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းမယ့် လက်သည်းလေးရပါပြီရှင်။
မူရင်း tutorial က Youtube: Cutepolish (Bridal Nail Art) မှ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းလေးကို သဘောကျမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 3:12 PM ကိုရီးယား
ဟိုနေ့က ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိတာနဲ့ City Hall (시천) ဘက်ကို ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အပြန် ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ကြည့်တော့ ဒီဆိုင်လေး ...
ဆိုင်းဘုတ်မှာ အီးတုံးလေးတင်လို့... အပြင်အဆင်ကလည်း အီးတုံးပုံလေးတွေ..
ရောင်းတော့ အစားအသောက်.. hik hik :P
အစားအသောက်ကလည်း အီးတုံးပုံလေးတွေပါပဲ။ :D
အီးတုံး မစားချင်သူများအတွက် ကောင်မလေးပုံလည်း ရောင်းပါတယ်။
မြတ်ကြည်လည်း မစားဖူးမရှိရအောင် အီးတုံးတစ်တုံး ... အိ ... မုန့်တစ်ခု ဝယ်စားပါတယ်။ :D
ဟဲ့ပလုတ်တုတ် ... ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ မုန့်ဆိုင် လမ်းကြားထဲက ထွက်လာပါလား!!!
... ဒုံဂွမ် ဒုံဂွမ် ဂွမ်ဂွမ်ပလုံ ဒုံဂွမ် ...
Deoksugung (덕수궁 ) နန်းတော် ဂိတ်စောင့် လဲ တာပါ။ ဪ..
ရိုက်မှရိုက်ပါ့မလားလို့... ဟီဟိ (ငှါးခ အလကား)
အနားမှာ ဒီလို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေလည်းရှိတယ်။
တစ်ထုပ် ၃၀၀၀ ဝမ်
ဒီနေရာလေးကို သွားမယ်ဆိုရင် ...
Subway line 1 ကိုစီး၊ City Hall (시천) Station (Exit 2) ကထွက်၊
11:00 ၊ 14:00 နဲ့ 15:30 မှာ နန်းတော် ဂိတ်စောင့်လဲတာကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုးလ်မြို့ တစ်ခေါက် အလည်ရောက်ရင် သွားကြည့်ကြဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ :)
By **~ မြတ်ကြည်~** 9:32 PM မျက်​နှာ အလှပြင်​ makeup
၂၀၁၂မှာ Winged Eyeliner ပုံစံ ဟာ Celebrities တွေတက်တဲ့ ပွဲ တွေမှအစ သာမန် လူနေမှုပုံစံမှာလည်း ရေပန်းစား နေတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ယခုနှစ် ဆုပေးပွဲမှာလည်း celebrities တွေက winged eyeliner ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ခြယ်သလာကြပါတယ်။
အဲဒီအထဲကမှ လူကြိုက်များတဲ့ eyeliner ပုံစံတွေကို Bella Sugar : Winged Eyeliner at the Oscars 2012 မှာ ဖော်ပြထားတာကို စာဖတ်သူပျိုမေများအတွက် ကောက်နှုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Forest Green အရောင် Eyeliner ကို Carbon Black မျက်တောင်တု နက်နက်၊ Glossy pink နှုတ်ခမ်းနီ နဲ့ တွဲထားပါတယ်။
Cat-eye liner ပရိတ်သတ်ဖြစ်တဲ့ Dita Von Teese ကို Retro ဆန်ဆန် လိုင်နာထူထူ နဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ
လိုင်နာ ပါးပါးမျှင်မျှင်လေးကို အစွန်းမှာ ကော့ပြီး ဆွဲထားတဲ့ ဂန္ဒဝင် Audrey Hepburn ရဲ့ စတိုင်လ် အတိုင်း ခြယ်သထားပါတယ်။
Oscar ည အတွက် ခေတ်ရှေ့ပြေးဆုံး ပုံစံပါ။ မျက်လုံးကို Double wing တင်ထားပြီး မျက်ခုံးရိုးကို Contour ထင်းထင်းလေး ဖြည့်ထားပါတယ်။
ရွှေရောင် shadow အခံမှာ မျက်ခွံပေါ်အထူ၊ အစွန်းမှာ ပါးပါးလေးကော့တက် တဲ့ flipped-out wing ပုံစံ နဲ့ တွေ့ရပါတယ်။
တမူထူးခြားတဲ့ ပုံစံနဲ့ Wing ကို ရှူးမသွားပဲ shadow နဲ့ခပ်ထူထူလေး ခြယ်သပြီး အဆန်းထွင်ထားပါတယ်။
Winged eyeliner ပုံစံ တွေကတော့ အမျိုးမျိုးပါပဲနော်။ မြတ်ကြည်တော့ J-lo ခြယ်ထားတဲ့ double wing မျိုးလေး ခြယ်တတ်ချင်တယ်။ တော်တော်လှတယ်နော်။
စာဖတ်သူတွေရော၊ eyeline ခြယ်လေ့ရှိပါသလား?
ဘယ်လို ပုံစံမျိုး ခြယ်ဖြစ်ပါသလဲ?
Anonymous အနေနဲ့ ပါ comment ပေးလို့ရအောင် ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါပြီရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 8:04 PM တိုတိုထွာတွာမှတ်စရာ
ဒီ နည်းလေးကို စံဇာဏီဘို အချစ်ဗေဒင်ထဲက ယူပြီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ :) အပျင်းပြေတွက်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်။
ကိုယ်တိုင်လည်းတွက်၊ သူငယ်ချင်းတွေကို လည်း တွက်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။
မြန်မာမွေး သက္ကရာဇ် ကို မွေးဂဏန်းနဲ့ပေါင်း၊ ၇ နဲ့စားပါ။ ရလာတဲ့ အကြွင်းနဲ့ အဖြေနဲ့ကိုက်ပြီး လိုက်ဖတ်လိုက်ပါ။
မွေးသက္ကရာဇ် = ၁၃၄၉
ကြာသပတေးနေ့မွေးနံဂဏန်း = ၅
နှစ်ခုပေါင်းရလဒ် = ၁၃၄၉ + ၅ = ၁၃၅၄
အဲ့ဒီရလဒ်ကို ( ၇ ) နဲစားပါ။ အကြွင်းက (၃) ရပါတယ်
......... ဘောပင်နဲ့ စာရွက်တစ်ရွက်ယူပြီး တွက်လိုက်ရအောင်နော်။.........
အကြွင်း ( ၀ )
လိုချင်စိတ်များတယ်။ရတာနဲ့မတင်းတိမ်ဘူး။ရောင့်ရဲတဲ့စိတ်မ၇ှိဘူး။ရောက်နေတဲ့နေရာမှာမပျော်ပိုက်ဘူး။ဒီထက်ပိုသာတဲ့ဘ၀ကိုလိုလားနေတဲ့သဘာဝရှိတယ်။ တစ်ခုမပီးခင်နောက်တစ်ခုလုပ် ၊ လောကကြီးကိုလက်ဝါအုပ်လိုတဲ့စိတ်ဗီဇရှိတယ်။တရားသဖြင့်လား မတရားသဖြင့်လား စဉ်းစားမှာ မဟုတ်လို့ တနေ့ ဒုက္ခတွေ့မဲ့သူမျိုးပါ။ ဘယ်သို့ဆိုဆိုစေ သူကတော့ရည်းမှန်းချက် ကြီးကြီးနဲ့ ဖြတ်သန်းမဲ့သူမျိုးပါ။ စနစ်တကျ နေထိုင်လုပ်ကိုင်သွားအေင် ထိန်းပေးရင်တော့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ လူသားတယောက်ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်မှာသေချာပါတယ်။
စိတ်ကြီးတယ်။ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိတယ်။ မတော်မတရားမြင်ရင်ကိုယ့် ကိစ္စမဟုတ်ရင်တောင်ဝင်ပြီးပါဖို့ပြောဖို့ဝန်မလေးဘူး။ အလိုလိုဘေးကဒေါသ ထွက်နေတတ်တယ်။ စိတ်တိုဒေါသထွက်နေရင်လဲ အန္တရာယ်မကြေက်တတ်ဘူး။ ပြောပစ်လုပ်ပစ်တတ်သူမျိုးပါ။ဒီသဘောရှိတဲ့သူဆိုတော့ နှလုံးသားလေးကဖြူစင်လွန်းသူပါ။ သူတပါး ထိခိုက်အောင်ဘယ်သောအခါမှ သူက စလုပ်လေ့မ၇ှိဘူး။သူတပါးကိုကျွေးရမလားမွေးရမလား ထိပ်ဆုံးကပေါ့။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်မခံ စိတ်မြန်လက်မြန်တာကြောင့် အမြဲရန်သူတွေ နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတတ်ပါတယ်။ စိတ်မြန်ပုံကတော့ ဖိနပ်စီးရတာ အဆင်မပြေရင်တောင် ဖိနပ်ကိုကန်ထုပ်ပီး ခြေဗလာနဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်သူမျိုး ပါ။ အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကို ထိန်းနိုင်သွားတဲ့သူဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်လာမှာပါ။ မမေ့နဲ့နော် လူဖြောင့်စိတ်တို ဆိုတဲ့စကားလေးကို...
အကြွင်း ( ၂ )
သိပ်တွေဝေတတ်သူမျိုးပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို ဘယ်တော့မှ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မချဘူး။ အရာရာကိုမေ့နေတတ်တယ်။တခါတလေငေါင်တောင်တောင်နဲ့နေတတ်တယ်။ သီးသန့်နေလိုစိတ် ပြင်းတယ်။ ပြသနာတွေ့လာရင်လဲတယောက်တည်းမဖြေရှင်းတတ်ဘူး။အပြောအေးအေးလေးနဲ့ ကျလောက်အောင်ပြောတတ်တယ်။ ရိုးပုံအေးပုံ ပုံစံလေးကြောင့် သူ့ကိုသိပ်ခင်ကြမယ်။ ပြသနာတွေ့နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာတောင် ဒါတွေကိုမေ့ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတတ်တယ် ။လေးလေးနက်နက်မ၇ှိဘူး။ စကားကိုသာကျအောင်ပြောတာ ရှေ့ နောက်ညီ မညီကိုပြောပြီးမေ့နေတတ်တယ်။ စိတ်ဓာတ်တက်လွယ် ကျလွယ်ဖြစ်တတ်တယ်။ အရာရာကိုတွေဝေ နှောင့်နေးလွန်းတာကြောင့် ဘ၀မှာအခွင့်အရေးတွေအမြဲလက်လွတ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ သူ့အပေါ်မှာ နိုင်နိုင်နင်းနင်း ပဲ့ထိမ်းပေးမဲ့သူ၇ှိမှ သူ့ဘ၀ဟန်ကျမယ့်သူပါ။နောက်ကလိုက် တချိန်လုံးပြောနေနိုင်မှ တန်၇ုံကျမဲ့သူမျိုး။ အပြောခံရလို့ စိတ်ဆိုးမှာစိတ်မပူနဲ့။ သူကမှတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။
အကြွင်း ( ၃ )
မေတ္တာသမားကြီးပါ။ အားနာတတ်တယ်။ ယုံ စားတတ်တယ်။ သူတပါးအပေါ်နားလည်ခွင့်လွတ်တတ်တယ်။သည်းခံစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူး သြချလောက်တယ်။ အရာရာကိုရင်ဆိုင်၇ဲတယ်။လူတိုင်းအပေါ်လေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲနိမ့်ချနေတတ်တယ်။အနေရိုးပေမယ့် သွားအထင်မသေးနဲ့ ခင်သူမင်သူပေါတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်အပေါ် လူတိုင်းက သဘောကျ ပြီး နေရာပေး ဆက်ဆံကြတယ်။မေတ္တာတရား ထားလွန်းတာအပေါ် ဘေးလူတွေကနားမလည် အားမလို အားမရ ဖြစ်နေတတ် တယ်။မဟုတ်တာမလုပ်ဘူး။ လူတိုင်းအပေါ် တစုံတရာတန်ဖိုးထားလေးစားဆက်ဆံတယ်။ အပြောသမားမဟုတ် လက်တွေ့ဆန်တယ်။အချစ်မေတ္တာအပေါ်လေးလေးနက်နက်တန်ဖိုးထားသူမျိုးပါ။
အကြွင်း ( ၄ )
ခံစားတတ်တယ်။ စာနာတတ်တဲ့စိတ်ကအပြည့်၇ှိတယ်။ ချစ်သူခင်သူတွေကိုဖြစ်ဖြစ် သတ္တ၀ါတွေကိုဖြစ်ဖြစ် သနားပါတယ်နော် ဆိုးပြီး စာနာစိတ်လေးနဲ့ ကူညီလိုတဲ့စိတ်အမြဲ၇ှိတယ်။ စိတ်ဆိုးလည်း ခဏပဲ။ ဂရုဏာသမားမို့ ရန်သူကိုတောင်သနားတတ်တယ်။ သုတို့ကသူများအပေါ်ဂရုဏာထားသလို သူတို့အပေါ်ကိုလည်း သူများကပြန်ဂရုဏာထားတာကိုလိုလားကြတယ်။ ဂရုမစိုက်ဘူး အလေးမထားဘူး အချစ်ပေါ့တယ် သူ့ကိုနေရာမပေးဘူးလို့ထင်ရင် စိတ်ကောက်ပြီး ၀ုတ်ဒိုင်းကြဲ အ၇ွှဲ့တိုက်တတ်တယ်။ အမြန်ချော့ပေးပါ။ လူပုံစံ စတိုင် ဟန်ပန်ကအစ ပြုမူပြောဆိုပုံကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ မာကျစ်ကျစ် ၊ဘုဂွပြော ၊ မသနား အကြင်နာစိတ်ခေါင်းပါးတဲ့ သူပုံပေါက်နေ ပေမယ့်တကယ်အတွင်းစိတ်မှာတော့ ဂရုဏာအပြည့်နဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အကြွင်း ( ၅ )
မုဒိတာလက်ကိုင်ထားနိုင်တဲ့သူမျိုးဟာ အလွန်ပဲရှားပါးလွန်းပါတယ်။ သူတပါး အောင်မြင်တာ၊ ချမ်းသာတာ၊ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်တာ၊ အလုပ်အကိုင်တိုးတက်တာ တွေကို တွေ့ရင် မိမိအောင်မြင်နေသလို ခံစားဝမ်းမြောက် သူမျိုးပါ။ မနာလို ၀န်တိုစိတ်မရှိဘူး။ အတင်အဖြင်းမပြောဘူး။ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ အရာရာရင်ထဲမှာ ခံစားပြီး လုပ်တတ်တဲ့ သူမျိုးပါ။ မှန်ကန်မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့်ကြီးပွားအောင်မြင်မည့်သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူတပါးအပေါ်ငယ်ကျိုးငယ်နာဖော်ပောတာလုပ်တာကိုမုန်းတီးသူမျိုးဖြစ်သလို ကိုယ်ကလည်း မလုပ်ဘူး။ လုပ်ရပ်တွေကိုလည်းလက်မခံဘူး။ သူတပါးရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို အပြုသဘောနဲ့ အကြံပေးတက်သူမျိုးပါ။ အရာရာအပေါ်မှာ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနဲ့ သူတပါးကိုဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်စေသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်နဲ့ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင် ပါ။
အကြွင်း ( ၆ )
အလွန်ထူးခြားတဲ့သူမျိုးပေါ့။ ဘာသိဘာသာ အေးအေးပဲနေတယ်။ တစ်ပါးသူကိစ္စတွေကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဖို့ အမြဲကြိုးစား နေတတ်တယ်။ ရန်လုပ်လာရင်တောင် ကိုယ့်ကိုလုပ်နေတာမဟုတ်သလို မသိသလို နှုတ်ဆိပ်နေတတ်တယ်။ဥပက္ခာပြုကျော်ခိုင်းနေတတ်တယ်။တည်ကြည် တည်ငြိမ်ပြီး လူသားအားလုံးကိုမှန်တယ်ထင်တာလုပ်နေတာပဲ ဘာမှဝင်စွတ်ဖတ်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုးကို ထားပြီးနေတတ်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ဖူးတဲ့ဝန်းကျင် ကိုယ့်အလုပ်ကိုသာ စူးစူးစိုက်စိုက်လုပ်လို့အောင်မြင်နေတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။ အနေအေးပြီး မသိသလိုမဆိုင်သလိုနေနေလို့ ဘာမှမသိဘူးမထင်လိုက်လေနဲ့။ အရာရာကိုလေ့လာတယ် အရာရာကိုနားလည်လွယ်လို့ အပြစ်မမြင်ပဲနေတတ်သူမျိုးပါ။ အခက်အခဲ၇ှိလာရင်တော့ သူလိုလူမျိုးဆီက အကူအညီးတောင်းသင့်ပါတယ်။ လူကြီးလူကောင်း တွေ အနောက်နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ GENTLEMAN ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့။ ယဉ်ကျေးတယ်၊ သိမ့်မွေ့တယ်၊ အရေးကြုံရင်အားထားရတဲ့သူမျိုးပါ။ တကယ့်ကိုအမြင် ကြည်လင်တဲ့သူမျိုးးပါ။ တစ်ခါတလေသာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားပြီး ကျွတ်တန်းဝင်တရားထူး ရတတ်သူတွေလို့ ပညာရှင်တွေ ဆိုကြပါတယ်။
ကိုက်ရဲ့လား မသိနော်? အပျင်းတော့ပြေသွားတယ်ဟုတ်?
စာဖတ်သူများအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။
ခရစ်သက်ကရာဇ်ထဲကနေ ၆၃၈ ကိုနှုတ်ရင် မြန်မာ သကရာဇ် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ ဧပြီလ ထက် စောပြီးမွေးရင် ၁ ထပ်နှုတ်ရပါတယ်
ဝက်ခြံ အမာရွတ်တွေကို သက်သာစေမယ့် AC+ Spot care patch
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:35 PM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
Nature Republic မှာ lotion သွားရှာရင်းနဲ့ Problematic skin spots တွေကို intensive care ပေးပြီး သက်သာလျှော့ချစေတယ် လို့ရေးထားတာတွေ့လို့ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ အစမ်းဝယ်လာတာပါ။
အသုံးပြုပုံပြုနည်းက သူ့မှာပါတဲ့ အဝိုင်းပြားလေးတွေကို ဖလင်ပေါ်ကခွါပြီး မျက်နှာပေါ်က ပြသနာ ဖြစ်နေတဲ့ နေရာလေးတွေအပေါ် လိုက်ကပ်ရုံပါပဲ။ မကပ်ခင် မျက်နှာသစ်၊ ဘာမှမလိမ်းဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ တစ်ထုပ်မှာ အဝိုင်းပြားလေး ၁၂ ပြားပါတယ်။
သူ့ကို ၈နာရီကနေ ၁၂နာရီအထိကပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အာနိသင်အကောင်းဆုံးရချင်ရင် အိပ်ယာမဝင်ခင် ကပ်ဖို့ ညွှန်းထားပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်က ဝက်ခြံပေါက်လို့ နီပြီး အမာရွတ်ကျန်တဲ့နေရာလေးတွေ ကပ်ပြီး အိပ်လိုက်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ " ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လား၊ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါလေ" ဆိုပြီး ...
မနက်နိုးနိုးချင်း မှန်ပြေးကြည့်တာ တော်တော်သက်သာနေတာတွေ့ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ဓာတ်ပုံပြေးရိုက်တော့တာပဲ။ :D
ညမအိပ်ခင်ပုံပါ။ မနက်မိုးလင်းပုံ (မျက်နှာမသစ်ရသေး)
အကြာကြီးစွဲလိမ်းစရာမလိုပဲ တစ်ညထဲနဲ့ သက်သာတာဆိုတော့ အဆင်ပြေတာနဲ့ စာဖတ်သူတွေအတွက် လမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်။
ဝက်ခြံ အကြောင်းပတ်သက်လို့ကတော့ ဒီလင့်လေးကို သွားကြည့် ပါနော်။
ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် ဘလော့ဂါတို့ရဲ့အမြင် (Tag Post)
ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် အမြင်ကတော့ မြတ်ကြည်သူငယ်ချင်းရေးထားတဲ့ ဒီပို့စ် လေးနဲ့ တော်တော်ထပ်တူကျပါတယ်။ မရေးခင် သေချာသိရှိနားလည်အောင် ရှာဖွေလေ့လာတတ်တဲ့ သူ့ကိုလည်း မချီးကျူးပဲမရေနိုင်ပါဘူး။ အစကနေ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ရှင်။ :)